Umahluko phakathi izihlangu ukhuseleko lezaBasebenzi kunye neembadada zesiqhelo ikakhulu kubonakala amanqaku 3 - China Gaomi Ruigu Labour Protection
Umahluko phakathi izihlangu ukhuseleko lezaBasebenzi kunye neembadada zesiqhelo ikakhulu kubonakala amanqaku 3
Umahluko phakathi izihlangu inshorensi yabasebenzi kunye nezihlangu eziqhelekileyo becala iboniswa amanqaku 3, mna ndiyakholwa nawe ukwazi ukuba yintoni amanqaku 3 ziboniswe.
1.According ukuba umahluko Ifilosofi yoyilo, izihlangu yokhuseleko yabasebenzi yenzelwe ukukhusela ukhuseleko zeenyawo yabantu abasebenzayo. Ngoko ke, ukhuseleko yeyona nto iphambili ukuba zithathelwe ingqalelo kuyilo.
Yintoni yezihlangu eziqhelekileyo iqwalasela sihle, ukhululekile, nendlela, ephathekayo kukuthi, nokubonelela nemfuno umthengi kuphela.
umahluko 2.The ibonwa ukusuka kwindawo ukusetyenziswa: uninzi iindawo ukusetyenziswa weembadada yokhuseleko yabasebenzi kwiindawo zokusebenza ezithile ezifana workshop electroplating, esakhiweni mveliso omkhulu noomatshini.
izihlangu zesiqhelo asetyenziswa ngesiseko ngenxa ukuhamba, zentengiso kunye neendawo zoluntu ezifana ofisi ngaphandle yingozi enkulu.
3. Ukususela Ngokwembono yokwenza izinto zezihlangu ngokwabo, iiyantlukwano ingabonwa: izihlangu zesiqhelo ngokubanzi yenziwe ngezinto eziqhelekileyo, ezifana nezinto umphezulu textile ngelaphu, isikhumba ngumntu, njalo njalo, ngexa izihlangu yokhuseleko yabasebenzi kufuneka zenziwe ngezinto ezilungileyo usambathisa , izinto electrostatic, senkomo, ukumelana lobushushu eliphezulu kunye nezinye izinto ezikhethekileyo.
Singasathethi ke kuphela, izihlangu abaqhelekileyo abona outsole TPR, ukusuka imarike lwangoku, izihlangu yokhuseleko wezaBasebenzi ubukhulu becala ukusetyenziswa yamathe irabha okanye amathe DB.
ixesha Post: Aug-28-2018